သံတွဲမြို့သို့အယ်ကိုင်ရာ(ဝေဖတ်) အဖွဲ့ဝင်၄၀ဦးမေ၂၆နေ့ဝင်ရောက်မည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Authors » သံတွဲမြို့သို့အယ်ကိုင်ရာ(ဝေဖတ်) အဖွဲ့ဝင်၄၀ဦးမေ၂၆နေ့ဝင်ရောက်မည်
- adu lar
Posted by adu lar on May 25, 2012 in Authors, Thakhin: CJ Only | 29 comments
About adu lar
adu lar has written2post in this Website..
View all posts by adu lar →
အယ်ကိုင်ရာ ဆိုလို့ အဆိုတော်ထင်နေတာ
အယ်ကိုင်ရာ ဆိုတာ ..
အဆိုတော်မလေးဆိုပြီး ဖရဲတို့ သွားများ ငမ်းမိရင် ..
ဟိုက ဘိုးအေတွေက ပေးလွှတ်လိုက်မှာ မြင်ယောင်သေး ..
ကျနော် သတင်းတွေထဲ ဖတ်မိတာတော့ အယ်ကိုင်ရာလို့ မရေးဘူးဗျ
အယ်လ်ကေးဒါးလို့ ရေးထားတာ တွေ့မိသလိုပဲ … ဟုတ်လားတော့ မသိဘူး ..
အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ says:
ဟေ့လူ. ခဏနေ အောင်အောင်လို့ တစ်မျိုး၊ထွန်းထွန်းလို့ တစ်မျိုး၊အဒူလာလို့ တစ်မျိုး လှည့်ပတ်
လျှောက်ရေး မနေနဲ့ ။ကျနော်တို့ မြို.ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို့ မွတ်စလင်မ်တွေနဲ့ သက်သက်ရန်တိုက်
adu lar says:
ဟေ့ကောင်. ——မင်းတို့ လို မနေ့ တနေ့ ကမှ ဝင်ပြီး မန္တလေးဂေဇက်ကို တိုင်စာဌာနလို သဘောထား
လျှောက်ပြီး အားယားတိုင်း ပို့ စ်တင်မနေနဲ့ ။ဘာလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ မဆိုင်ရမှာလဲ။ဌာနဆိုင်ရာတွေ
ခွင့်ပြုမှ ဝင်ခွင့်ထွက်ခွင့်ရတဲ့ မြို.့ ၊မြို့ ခံမွတ်စလင်မ်တွေတောင်မှ လွတ်လပ်စွာ ခရီးသွားနိုင်တာ မကြာသေး
တဲ့မြို.့ ဆိုတာ မင်းမေ့နေလို့ လား။မြို့ ရဲ.့ ဌာနဆိုင်ရာတွေ၊ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အဖို့ စိတ်အနှောင့်အ
ယှက်ဖြစ်စရာမို့မင်းရဲ.့ ဖြုတ်ဦးနှောက်နဲ့ စဉ်းစားပါအုံး။
သူများကို မျက်မှန်တပ်ပါတွေ၊ဘာတွေ လုပ်မနေနဲ့ ။နောင်ကို ရေးမယ်ဆိုရင် အခြေမြစ်ရှိတဲ့ သတင်းကိုရေးပါ။
မန္တလေး ဂေဇက်သိက္ခာကျသလို၊ငါတို့ မြို.့ သိက္ခာကျတယ်။မင်းတို့ အရှက်မရှိတိုင်း လျှောက်မရေးနဲ့ သံတွဲ
သား တွေ သိက္ခာကျအောင်မလုပ်နဲ့ ကွာ။
ဟေကောင်နွား . .
လူတစ်ယောက်ကို. နွားလို့ ခေါ်ရအောင် ခင်များတို့ အစ္စလာမ်ဘာသာက သင်ထားတယ်ထင်တယ်။
သံတွဲသားတွေကြောင့် ပြောခံဆိုခံနေရတာ ရှက်တတ်ရင် ရှက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ဒါတိုင်စာဌာန မဟုတ်ဘူး
ဆိုတာ သိထား။ကျနော် ဘယ်သူ ဆိုတာ မန္တလေးဂေဇက်ရွာသူားတွေ သိပြီးသား။ကိုယ့်စကားကို့ တာဝန်
ယူရဲတယ် ဆိုတာမှတ်ထား။သိပ်ပြီး သိသိပ်ပြီးတိကျတယ်ဆို ရင် နာမည်အမှန်နဲ့ ရေး။မရေးရဲရင် ကျနော့်
ဖုန်း ကိုခေါ်လိုက် ကျနော်ရေးပေးမယ်။သိပ်ပြီး တတ်သလိုလျှောက်မလုပ်နဲ့ ဒေသခံ မွတ်စလင်မ်တွေပါ
ငရုတ်သီးနဲ့ ရောအထောင်းခံရတဲ့ ကြက်သွန်ဖြစ်သွားမယ်။
ဟေ့ ကောင် ခွေးသူတောင်းစာ နွား ကုလား (ပညာမတတ်အရိုင်းအစိုင်းကုလားကောင်)
မင်းလူမှမဟုတ်တာ၊မင်းသတင်းမှန်ရင်မှန်မမှန်ရင်မမှန်မင်းစုံစမ်းပြီးမရေးဘဲ ။မင်းအမေလင်တွေမို့လို့ မင်းဝင်နာနေလား။မင်းစကားထဲကဇာတိပေါ်တာ၊
မင်းကျောက်နီမော်ကုလားမို့ လား ။မင်လဲအယ်ကိုင်ဒါနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီးတစ်ဖွဲ့မို့
လပိုင်ရှိသေးတယ် ၊အေးအေးမနေနိုင်လား။ ဒါကိုအခွင့်အရေးယူပြီးအုပ်စုလိုက်ဝင်လာ
ပြောတာလား၊ ငါတို့သံတွဲလူအများစုလက်မခံနိုင်ဘူး။ ငါက ကြည့်မရလို့အလကား FREE အကူအညီပေးတာ။မင်းစာတွေကြည့်နေတာကြာပြီဟိုလူရိ၊ဒီလူရိနဲ့၊ မနေ့တနေ့ကမှအင်တာနက်မြင်ဘူးတဲ့အကောင်ကများ၊စကားကို ဂေဇက်ကိုမင်းပိုင်တဲ့အတိုင်း
မင်းနာမည်ကို မင်းကိုယ်တိုင်နားမလည်ရင်ငါမှည့်ပေးမယ် လီးချစ်သူလို့မှဲ့
အယ်ကိုင်ဒါး တွေက အရင်က ဒီနိုင်ငံထဲ မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုတာလား…
ဒီပို့စ်တော့ မျက်ခုံး ခပ်လှုပ်လှုပ်ပဲဝေ ၊ လူသစ်ကလဲ ဆဲတတ်လိုက်တာ ၊
စာဖတ်သူတွေကို အားနာပါဦးဝေ ၊ ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေး ရှင်းပြတော့ကော ဘာဖြစ်မှာမို့လဲ ၊
ပြီးတော့ ဒီ သတင်းကလဲ ၂ ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သတင်းဟောင်းကြီး ၊
စေတနာထားတယ်ဆိုတာ ဒီလောက်ဒေါသ ပါစရာမျိုးလား ။
အော်. သနားစရာကောင်းလိုက်တဲ့ adu larရယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ. မနေ့ တနေ့ ကမှ အင်တာနက်သုံးတတ်
တာပါ။ကျနော့်နာမည်ရော၊လိပ်စာရော၊ဖုန်းနံပါတ်ရော ကျနော့်ပို့ စ်တွေထဲမှာရှိပြီးသား တွေ့ အောင်သာရှာလေ
တော့။အော် ဒီလို အရိုင်းအစိုင်းကောင်တွေရှိလို့ လဲ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက မွတ်စလင်မ်များအပေါ်
တစ်ခုတော့ ပြောလိုက်မယ် သိပ်ပြီးလေမပွနဲ့ လို့ တောင်းပန်တယ်။ရောယောင်ပြီး ပဲထမင်းစားသွားနေရအုံးမယ်။
ဒီပို့ စ်ဘယ်လောက် အန္တရာယ်ရှိတယ် ဆိုတာ နားလည်ပါ။
မင်းလိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ် အလိမ်တွေပါကွာ၊ ငါကနိုင်ငံတကာ
မောင်သန်းထွဋ်ဦး/အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ says:
ရီစရာပါလား ကိုရင်ရယ်။စကားဆိုတာ ပြောဖန်များရင် စကားထဲက
ဇာတိပြနေပါရောလား။ကျနော့် လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ရော ရှာတွေ့ ပီ
လား ဆရာကြီးရယ်။ဖြေးဖြေးသက်သာ လုပ်ပါဗျာ။
ကျနော်ကဘဲ လိပ်စာ လိမ်ရအောင် ခင်များတို့ လို အားယားနေတယ်
တန်ဖိုးရှိတဲ့ သတင်းကိုပြောပါ၊အတင်းကို သတင်းဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ ။
နောက်နောင် ဒီလို မျိုးဝင်ကို မရေးတော့ဘူး။အဓိပ္ပာယ်ကိုမရှိပါဘူး။
@Ko Kai-ထိုင်ကြည့်နေတာကို အထူးအံ့သြမိပါရဲ.့ ဗျာ။
ဂေဇက်မှာ ဆဲတာဆိုတာ တွေ မလုပ်ရဘူးတဲ့ သူကြီး စည်းကမ်း ထုတ်ထားတာပါ
ကျွန်တော်တို့က သတင်းဆိုလည်း လေးလေးစားစားဖတ်ပါတယ် တကယ်လည်း
စာရေးသူတွေ ဖတ်သူတွေကို လေးစားပါတယ်။
တယောက်နဲ့ တယောက် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတွေနဲ့ မတုန့်ပြန်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
gwa toe says:
သတင်းေ၇း တာ ကို လဲ သတင်းနဲ့တူအောင်ေ၇းဘို့လိုတယ် အတင်းေ၇းသလိုလဲမေ၇းကြပါနဲ့ ဗျာ မှန်ကန်တိကျမှူ ၇ှိတဲ့သတင်းလေးတွေကိုေ၇းတင်ပေးစေချင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကသတင်းလေးတွေကိုအားကိုးပြီိးဖတ်နေ၇တာဆိုတော့ေ၇သားတဲ့လူတွေကို အမှန်တွေတင်ပေးနေတယ်လို့ဘဲယူဆပါတယ် ၇န်ဖြစ်မနေကြပါနဲ့ ဗျာ ကြည်၇တာလဲအ၇ုပ်ဆိုးပါတယ် သတင်းမှန်သာဆို၇င် ၇ဲ၇ဲ သာတင်လိုက် အားပေးနေပါတယ် တင်ပေးတဲ့သူတွေကိုလဲအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုယ်ေ၇းခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို နောက်ဆုံးမှာ ပေါကြောင်သတင်းတွေမဖြစ်စေချင်ပါဘူးခင်ဗျာ။
တစ်မြို့ တည်း သားချင်းတွေပဲဗျာ..
ကိုဒူလာလဲ စိတ်ရှော့ ကိုကိုင်စရာလဲ စိတ်လျှော့
၂၆ ဆို မနေ့ ကပေါ့နော..
သတင်းနောက်ဆက်တွဲလေး ရေးပါဦး..သိချင်လို့ ..
အမလေး ကိုဗိုက်ရယ် ဘာမှတမြို့ ထဲသားချင်းမဟုတ်ပါဘူး။
နေရင်းထိုင်ရင်း ရပ်သိရွာကျော် ကျနော့် ဖုန်းနဲ့ လိပ်စာတောင်
လိမ်တယ် ပြောတဲ့သူနဲ့ ဖက်မပြောတော့ဘူး။ရှက်တတ်ရင် လဲ
သတင်းက ဘာမှနောက်ဆက်တွဲမှာ မဟုတ်ဘူး အူးဗိုက်ရေ။
ဘာမှလဲ မဟုတ်သလို မနာလို သွေးခွဲကြတဲ့ အတင်းဘဲလေ။
မင်းဘာသာရေးဆွဲထည့်မနေနဲ့ . . ကုလားပျက်ဆိုတာသိထားပါ .
ပို့ စ်တင်သူ. စကားအပြောအဆိုဆင်ခြင်ရင် သိပ်ကောင်းတော့မယ်။
ခင်များကို ဘာသာတရားကရော၊မိဘ၊ဆရာသမားတွေကရော အဲ့လို
ခင်များကို ကျွန်တော်တစ်ခုပြောလိုက်မယ် —-ကိုယ့်ဇာတိရုပ်ပေါ်အောင်
ခုလိုဇာတ်ပြမနေပါနဲ့ ။သိပ်သတ္တိရှိနေရင် ခင်များနဲ့ ကျနော်နဲ့ အပြင်မှာ
ရှင်းမယ်။မဆီမဆိုင်တာတွေ လျှောက်ရေးမနေနဲ့ ။စကားကျွံ ရင်နှုတ်မရ
ခင်များတို့ လို အရေမရ၊အဖတ်မရကောင်တွေမပြောနဲ့ ဘယ်အာဏာပိုင်
အဖွဲ့ အစည်းကိုမှ မကြောက်လို့ နာမည်အရင်းနဲ့ ရေးနေတာ။
ခင်များကို ခင်များ ယောကျာ်းလို့ သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင် နေရာပြောလိုက်
တတ်တဲ့ လူတော့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ထား။
ခုလောက်ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာစွာ ဆဲဆိုနေသော ပို့ စ်ကို ဖျက်ပေးရန်မသင့်ပါလော။
ဘာကြောင့်ထိုင် ကြည့်နေသည်ကို ကျနော် နားမလည်နိုင်ပါ။ကျနော့် အကျင့်
သို့ adu lar
ခင်များ က ယောကျာ်းပီသပါတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်ယူဆလို့ နေရာပြောရင်ပြော၊
ဒါပေမယ့်. ကျနော် ရိပ်မိနေပါပီ။ခင်များဘယ်သူဆိုတာ. ——သနားတယ်ဗျာ။
ခင်များတို့ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေနောင်ဘယ်တော့မှ ခုလောက်ဥာဏ်ရည်ကကို
အမငီး… အဘကိုရင် ကိုးလုံးပုတီး ၃ပတ်စိတ်ပြီး ရွာထဲ ခဏ၀င်ကြည့်လိုက်ဒါ…
အဒူလာ အသူရာနဲ့ နာဂသိကြားတို့ စီးချင်း ဖိုက်ပွဲကို ခုမှ မြင်မိဒေါ့ဒယ်…
အဒူလာ အသူရာ ဒီလောက်ဆဲဆိုထားတာတောင် လှည့်မကြည့်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့
တို့သဂျီး အူးကိုင် ဘယ်ချောင်မှာ ဘလက်လေဘယ်နဲ့ သွားနှပ်နေလဲ မသိဘူးဂျ…
ဂါဝရောစ နိဝါတောစ၊ သန္တုတိစ ကတညုတာ
ကာလေန ဓမ်မသ၀နံ၊ ဧတံမင်္ဂလ မုတ္တမံ တဲ့ဗျ…
စိတ်လျော့….. စိတ်လျော့ ကိုယ့်လူ… :cool: :cool:
သမ္မတဆီလိပ်မူပြီး ပို့ နိုင်ပါတယ် ၊ကျွန်တော်ပို့ တဲ့ တိုင်စာလေး ဒီမှာတင်ဖူးတယ်။
မ်ိတ်ဆွေက ခုလောက်ရိုင်းစိုင်းနေပုံ နဲ့ တော့ အရေးယူပေးမယ့် သူကတော့ စဉ်းစားပေး
ဒီသတင်းအမှန်ဆိုရင် နောက်ဆုံးသမ္မတထိ လိပ်မူပြီးပို့ နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ မြို့ တိုင်စာလေး တင်ဖူးပါတယ်။
မိတ်ဆွေ ခုလောက်ရိုင်းနေတဲ့အပြောအဆိုနဲ့ တော့ အရေးယူတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
Yan Aye says:
ယခုရက်အတောအတွင်း သံတွဲမြို့သို့ ဝေဖွါးက်အမည်ခံ အလ်ကိုင်ဒါ အယောက် 40 ၀င်ရောက်မည်ဆိုသော သတင်းတစ်ခုကို ဂေဇက်တွင် တင်ထားသည်ကို တွေ့ရပါမည်။ စင်စစ်တွင် ၄င်းသတင်းသည် မနာလိုသူ လူလိမ်အဖျက်အမှောက်သမားများ၏ လိမ်လည်လုပ်ကြံထားသော သတင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဝေဖွါးက်ဆိုသောအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မြန်မာမုစ်လင်မ်ကလေးငယ်များအား လိမ္မာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းများကို လိုက်လံပို့ချပေးနေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအဖွဲ့ကို မြန်မာမုစ်လင်မ်များအားလုံးမှ ယုံကြည်လေးစားအားကိုးကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ် ရန်ကုန်မြို့မှ ဘာသာရေးခေါင်းကြီးများမှဦးစီးဦးဆောင်ထားပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရအသိအမှတ်ပြု အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ထောက်ခံထားကြပါသည်။ တိုင်းပြည်နယ်အသီးသီးတွင် မုစ်လင်မ်ပြည်သူများသည် ၄င်းဝေဖွါးက်အဖွဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်ကာ မိမိတို့၏ကလေးငယ်များအား လိမ္မာယဉ်ကျေးမှုစာပေများကိုသင်ကြားစေကြပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့ရှိ မုစ်လင်မ်ပြည်သူများမှလည်း မိမိတို့၏ကလေးငယ်များအား လိမ္မာယဉ်ကျေးမှုစာပေများသင်ကြားပေးရန် ၄င်းအဖွဲ့ကို ဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ရှိရာ သံတွဲမြို့နေ လူမှောင်ခိုအုပ်စုတစ်စုမှ ကလေးငယ်များလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားမည်ကို
မလိုလားသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ထင်ယောင်ထင်မှားသတင်းများက်ုတင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူများအား (ကျွန်တော် အမှားအမှန်နားလည်သူတစ်ဦးဖက်မှ) အထူးသတိပေးအပ်ပါသည်။
Thu Thu says:
သူတွေက ဟိုမရာက်ဒီမရောက် သင်းကွဲငှက်တွေလုပ်နေတာ၊သမီးတို့အခုဆိုဒီမှာဘဲယာဉ်ကျေးမူတက်
နေခဲ့တာ အခုဆို အဆင့်မြင့်တန်းတောင်ရောက်ပြီ၊သမီးတို့အဖေတွေ၊အမေတွေလဲ ကိုယ်ရပ်ရွာမှဘဲ
တက်ခဲ့တာ . လိမ်မာကြပါတယ်. တာလီဘန်အယူတွေယူမလာပါနဲ့မောင်းထုတ်လိုက်ပါ
ဒီမှာ မန့် ထားတာလေး ဝင်ကြည့်ပါဗျာ။Thu Thu မိန်းကလေးလို ပြောလို့ ။
“မောင်တောမှာ ရဲ(၂)ယောက်အသတ်ခံရ”ပို့ စ်မှာ ယောကျာ်းလေး။သူကြီး
မှန်ထှာအေ ဒီကောင်တွေ မဟုတ်တရုပ် သောင်းကြမ်းလို့ ဒီလို မျိုးတွေ ဖြစ်လာသလား
တောင် ထင်မိရပြီ ။ ဒီကောင်တွေလဲ ကြံရာပါ ဖြစ်နိုင်တယ် ။
အတုအယောင်အုပ်စု လုပ်ကြံမှု ဖြစ်မယ် ။
ဒီမယ့်ဗျာ အဲဒီကောင်တွေ သူသူဆိုတာရော၊အဒူလာလား၊အဒါလူလား
ထွန်းထွန်းဆိုတာရော ခုနာမည်တွေပြောင်းလို့ ၊ကျနော်သိတယ် အဲ့ကောင်
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on တွေးမိတာလေး ရေးပါရစေ
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on အကြံဥာဏ်လေးပေးပါဦးခင်ဗျာ
လုံမလေးမွန်မွန် on အကြံဥာဏ်လေးပေးပါဦးခင်ဗျာ
လုံမလေးမွန်မွန် on အမေပိုင်တဲ့မဏ္ဍိုင်ဆိုတာ
padonmar (79000 Kyats )
Shar Thet Man (68708 Kyats )
aungmoethu (61115 Kyats )